Ngaba Ukhubekile? | Martech Zone
NgoLwesithathu, uDisemba 31, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ukuba kudala ungumfundi apha, uyazi lonto Ndithandana neStumbleUpon. Ibhlog yam iyaqhubeka nokufumana inani eliphezulu leendwendwe ngeStumbleupon.
Njengomgaqo ngokubanzi, abantu abakuthandi ukuba uzenzele ngokwakho ukukhuthaza amaphepha akho kwiindawo ezinje ngeStumbleUpon. Mna ndingenise ezam izithuba ngaphambili - kodwa kunqabile. Ukuba bendicinga ukuba iposti inempikiswano okanye inokufumana ingqalelo enkulu kwimpembelelo yayo, ndingazikhubekisa. Ngaphandle koko, ndiyathemba ukuba abanye baya kulithanda iphepha kwaye balinike isithupha.
Oko kwathiwa, akukho nto iphosakeleyo ngokubuyela emva kwaye unike izithupha phezulu kumaphepha abanye esele bekhubekile kwiwebhusayithi yakho. Ukuba uzama ukukhangela idomeyini yakho okanye iwebhusayithi kwiStumbleUpon, uyakufumanisa ukuba uphando lwabo lubuhlungu kwaye lilinganiselwe kwiithegi ezizaliswa ngabasebenzisi.
Inqaku eliphambili: Ukuba bendiyiStumbleUpon, bendiya kuthi ngokupheleleyo sebenzisa uPhendlo oluSisiseko kuGoogle njengomthombo wengeniso.
Usebenzisa uGoogle, nangona kunjalo, unokufumana ngokulula ukuba leliphi iphepha lamaphepha esiza sakho esiKhubekileyo ukuze ubeke ivoti eyongezelelweyo! Kwibhlog yam, ndikhangela nje:
Indawo: khuboneupon.com martech.zone
Oku kundinika uluhlu lwamaphepha am abanye abaye bawakhubeka ukuze ndikwazi ukuphinda ndenze enye ivoti. Ukuzisebenzela? Mhlawumbi- kodwa ndoyame kwicala elilungile kuba omnye umntu sele eyibona ngathi iposti ikufanelwe kukukhubeka.
Ukuba ukuStumbleUpon, qiniseka ukuba ndongeze njengomhlobo.
Ngaba Kukhuselekile Umhlambi?
Izixhobo xa kuthelekiswa noVimba
Ngomhla wama-31 ku-Disemba 2008 ngo-11: 27 AM
Enkosi ngale posi. Ndizamile ukuyenza le nto ngaphambili kodwa andayifumana i-syntax kaGoogle okanye enye into. Kwaye unyanisile; IStumbleUpon kufuneka iphucule amandla ophando lwabo. Ndicinga ukuba kuya kuba kuhle ukuba iStumbleUpon ikuyeke ubange iiblogi zakho ukuze ubhalise kuhlaziyo nangaliphi na ixesha umntu akhubekiswa yenye yeendawo zakho.
Jan 1, 2009 kwi-4: 12 AM
UGoogle akafumananga onke amaphepha akwindawo yam angeniswe kwi-SU.
Njengawe, ndiyakholelwa kakhulu kwi-SU njengoko inegalelo kwelona nani liphezulu lezithuthi kubhlog yam.
Ndisayine iakhawunti kuba wonke umntu uthi yindlela yayo elungileyo yokuqhuba ukugcwala. Ndandihamba kwiprofayile yam kwaye ndinengxaki yokuqalisa, kubonakala ngathi kuyindida. Ngaba ucebisa naziphi na izikhokelo zokujonga kunye nokufunda ukuze uqalise kakuhle kwaye ufunde indlela yokuyisebenzisa?
Novemba 3, 2009 ngo-10: 09 PM
Enkosi, i-syntax yakho kaGoogle ibiluncedo kakhulu. Kubonakala ngathi ndinamaposti ambalwa kwi-SU, ndingaboni traffic nje 🙁
Nov 4, 2009 kwi-4: 00 AM
Ukukusebenzisa ngenene iStumbleUpon, qiniseka ukuba ungene apho kwaye uyisebenzise amaxesha ambalwa ngeveki ukuya kumanqanaba esayithi okhubeka kuwo. Nje ukuba wakhe iprofayile elungileyo, ndiyakholelwa ukuba ifuthe lakho liya kuphucuka. Musa ukukhubekisa iisayithi zakho, nangona kunjalo! Oko kuya kuthi kungakhathalelwa.